RSP's Huan Luong wuxuu ka caawiyaa diyaarinta farshaxanada VFX ee mustaqbalka | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » News » RSP's Huan Luong wuxuu ka caawiyaa diyaarinta farshaxanada VFX ee mustaqbalka
RSP's Huan Luong wuxuu ka caawiyaa diyaarinta farshaxanada VFX ee mustaqbalka
Caawiye baruhu wuxuu ku adkeysanayaa in ardaydiisu ay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyin gaar ah iyagoo ku tababaraya istuudiyaha saamaynta muuqaalka adduunka.
Adelaide, South Australia - Mid ka mid ah faa'iidooyinka barnaamijka tababarka saameynta muuqaalka ee Rising Sun Pictures (RSP) ayaa ah in fasalo lagu dhigo gudaha istuudiyaha saameynta muuqaalka ee shaqeynaya, mid u horseeday nolol muuqaal aan caadi aheyn xafiisyada sanduuqyada noocan oo kale ah. Ford v Ferrari, Spider-Man: Ka fogow guriga iyo Captain Marvel. Ardayda ka diiwaangashan koorsooyinkan waxay helayaan waxbarasho heer-koowaad ah oo ku saabsan saamaynta muuqaalka iyo markhaatiga, gacanta koowaad, sida xirfadahaas ay ugu adeegsadaan farshaxanno heer-sare ah oo xirfadlayaal ah oo u tolaya sixir-faneed shaashad loogu talagalay xayiraadaha berri.
Huan Luong, oo ah rinji yar yar iyo farshaxan roto ah iyo kaaliyaha barista ee istuudiyaha, ayaa yidhi ardayda RSP waxay ku raaxaystaan ​​faa iido aad u weyn oo ay ku hareeraysan yihiin ku dayasho khibrad sidan oo kale ah. "Waxaan ardayda u sheegayaa, haddii ay dhab ka tahay inay noqdaan xirfadlayaal, waxa ugu wanaagsan ee ay sameyn karaan waa inay dabaqa u baxaan oo ay la hadlaan fannaaniinta waawayn," ayuu yidhi. Waxay leeyihiin aqoon iyo khibrad. Way ogyihiin waxa ay ardaydu marayaan, maxaa yeelay iyagu iyagu way soo mareen. Waxay taageerayaan fanaaniinta da'da yar waxayna ku faraxsan yihiin inay caawiyaan. ”
Luong waa inuu ogaado sida uu ugu tababaray RSP laftiisa. Intii uu ka shaqeynayay Bachelor-kiisa Fanka ee Filimada iyo Telefishanka ee Jaamacadda Koonfurta Australia (UniSA), wuxuu bilaabay koorsooyinka VFX ee istuudiyaha oo ka kooban Isugeynta & Raadinta iyo Saamaynta Dhaqdhaqaaqa & Nalalka. Koorso kasta waxaa loo sameeyay in lagu muujiyo bii'ada istuudiyaha xirfadleyda ee hoosta hoolka ardayduna si iskaashi ah ayey uga shaqeeyeen si ay u dhameystiraan howlaha sida haddii loo qoondeeyay filim dhab ah. "Waxaan la shaqeynay barnaamijyada kala ah Maya, Nuke iyo Houdini, oo ah isla barnaamijkii lagu isticmaalay dabaqa, waxaanna ku daabacnay hanti dhuumo isku mid ah," ayuu yiri. “Xitaa waxaan isticmaaleynay hanti ka timid mashruucyadii hore ee lagu qabtay halkan RSP. Khibraddu waxay dareemeen run. ”
Kaaliye macallin ahaan, Luong wuxuu ka hoos shaqeeyaa macallimiinta sare ee istuudiyaha, oo ah halyeeyo muddo dheer ka soo shaqeeyay warshadaha saamaynta muuqaalka oo leh toos, khibrad gacan-ku-hayn ah oo ku saabsan filim heer sare ah iyo mashaariicda telefishanka. Kaalintiisu waa inuu hago ardayda markay ka shaqeynayaan inay bartaan barnaamijyada iyo farsamooyinka adag. "Waan ku raaxeystaa khibrada hal-hal ah ee ah in ardayda lagu dhex lugeeyo darbo adag," ayuu yidhi. Waxaan jeclahay dhinaca xalinta dhibaatada shaqadeyda farshaxanimo, laakiin sidoo kale waxaan jeclahay inaan ka caawiyo ardayda xalinta mashaakilkooda. Saamaynta muuqaalka, xaalad kasta waa mid gaar ah waxayna u baahan tahay xal u gaar ah. Waxaan ardayda baraa inay ku fikiraan hal-abuur. ”
Luong wuxuu xusayaa in tababarka ka socda RSP uu ka baxsan yahay barnaamijyada barashada. Ardayda waxaa la baraa sida loo noqdo xirfadlayaal iyo sida looga dhaqaaqo sidii looga bilaabi lahaa warshadaha. Istuudiyaha ayaa martigaliya fadhiyada "Maalinta Nolosha" halkaas oo farshaxanno xirfadlayaal ah oo ka kala socda waaxyo kala duwan ay uga hadlaan shaqadooda iyo waddooyinkooda shaqo. Shaqaalaha RSP ee HR waxay bixiyaan aragti ku saabsan dhismaha bandhigyada, xirfadaha wareysiga iyo xeeladaha shaqo raadinta. "Ardayda waxay waqtigooda ku isticmaali karaan halkan si ay ula xiriiraan macallimiintooda, farshaxanada kale iyo ardayda kale," ayuu tilmaamay. "Xidhiidhadaasi runti waxbay tarayaan markay qalin jabiyaan oo waxay bilaabayaan shaqooyinkooda."
Mar labaad, Luong wuxuu ka hadlayaa khibrad shaqsiyeed. Waxyar kadib markuu dhamaystay shaqadii koorsada VFX Meelaynta oo uu ka qaatay shahaadadiisa UniSA, furitaan ayaa kadhacay RSP. Waxaa loo soo bandhigay jagada ku saleysan aragtida adag ee uu ka qabtay macallimiintiisa iyo shaqaalaha kale ee istuudiyaha. Hadda wuxuu kala qaybiyaa waqtigiisa inta udhaxeysa kaaliyeyaashiisa mas'uuliyadaha barbarashada iyo inuu ka shaqeeyo dabaqa sidii farshaxan yari. “Waa kan ugu fiican labada adduun,” ayuu sharraxayaa. Waxaan la shaqeeyaa ardayda anigoo sii wadaya kobcinta xirfadaheyga farshaxanimo. Marka aan ka shaqeynayo dabaqa, marwalba waxaan ogaadaa wax cusub oo aan markaa la wadaagi karo ardaydayda. ”
Luong wuxuu leeyahay ardayda iskood iskudarsata, dadaala oo ka faa'iideysta fursadaha laga heli karo istuudiyaha waxaa hortaala waddo cad. "Ardaydu halkan way ka tagayaan iyagoo diyaar u ah inay galaan kaalimaha hore ee farshaxanka," ayuu yidhi. “RSP waxay leedahay sheekooyin badan oo guulo ah oo lagu taageerayo sheegashadaas. Ardaydeenu waxay ka shaqeeyaan istuudiyaha Australia oo dhan iyo caalamkaba. Qaarkood ayaa nasiib u yeeshay inay halkan ka shaqeeyaan, sida aniga oo kale. ”
In ka badan labaatan sano Rising Sun Pictures (RSP) waxay mas'uul ka ahayd farsameynta qaar ka mid ah xilliyada ugu caansan adduunka ee la joogo. Istuudiyaha waxaa ku yaal in ka badan 150 farshaxanno tayo sare leh oo si wada jir ah uga shaqeeya si ay u gaarsiiyaan sawirro cajiib ah. Iyada oo diiradda la saarayo soo saarista kaliya tayada ugu sareysa iyo xalalka hal abuurka leh, RSP waxay qaabeeysay dhuumo aad u dabacsan, dhuumaha caadada u ah, taas oo u oggolaaneysa shirkadda inay si dhakhso leh kor ugu qaaddo oo ay u hagaajiso hawsheeda, si ay ula kulanto baahida dhagaystayaasha ee muuqaalka muuqaalka leh ee had iyo jeer.
Istuudiyaha ayaa ku raaxeysta faa'iidada ah inuu ku yaallo Adelaide, oo ah mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu nolosha badan. Taasi, oo ay weheliso sumcaddeeda sharafta leh, iyo marin u helka mid ka mid ah dib-u-celinta ugu weyn ee la isku halleyn karo, ayaa ka dhigtay magnet filim sameeyayaasha adduunka oo dhan. Tani waxay ku riixday RSP inay sii wadato guusha waxayna u suurta gelisay inay gacan ka geystaan ​​mashaariic kala duwan oo ay ku jirto Carmal Madoow, Ford V Ferrari, Spider-Man: Ka fog Guriga, X-Ragga: Phoenix mugdi ah, Kabtanka Marvel, Dumbo, Qaadhayaha, Wadaadka Tacliinta, Peter Rabbit, World Animal, Thor: Ragnarok, Logan, Pan, ka X-Men wareejinta iyo Game of Thrones.
posts Latest by farsamo PR (arki dhan)
PNYA "Fasaxa Kadib" si Dib loogu eego Shahaadada Shakhsi ahaaneed iyo Ka Qeybgalka Bulshada ee Shaqaalaha Xooggan ee Soo Baxaya - February 23, 2021
MOD Wuxuu Helaa Xisbiga Wuxuu Ka Bilaabmay Ciyaarta Weyn - February 19, 2021
RSP's Huan Luong wuxuu ka caawiyaa diyaarinta farshaxanada VFX ee mustaqbalka - February 17, 2021
Previous: Eduardo Solana wuxuu ku biirayaa TVU Networks isagoo ah Agaasimaha Iibka ee Latin America
Next: Naqshadeynta Blackmagic waxay ku dhawaaqeysaa Kaamirada Filimka Blackmagic Pocket-ka cusub ee 6K Pro